Munhu anodzvinyirira varombo zvakaipa achida kuwanza upfumi hwake achipa zvipo kuvapfumi achapinda urombo.
 Taurira varanda kuti vateerere vatenzi vavo vavafadze muna zvose, kwete kuvapindura uye varege kuvabira, asi kutoratidza kuti vakanaka uye vanogona kuvimbwa navo zvechokwadi uyewo zvizere kuti muna zvose vayemurise chidzidziso chaMwari Muponesi wedu.
 Muranda uyo anoziva zvinodiwa natenzi wake asi asina kugadzirira kana kuita zvinodiwa naTenzi wake acharohwa zvikuru. Asi uyo akaita zvinokodzera kuti arohwe, acharohwa hake zvishoma. Munhu wose anopiwa zvakawanda, kwaari kunotarisirwawo zvakawanda. Kunouyo akaturirwa zvizhinji vanotarisirawo kwaari zvakatowandisa.
 “Kana munhu akatora mubhadha akarova muranda wake wechirume kana kuti wechikadzi muranda achibva afa pakarepo, munhu iyeyo ngaarangwe. Asi kana muranda iyeyo akazorarama zuva rimwechete kana maviri zvawo, tenzi wake haazorangwa nokuti muranda wacho anenge ari wake. “Ngatiti varume vorwisana, vokuvadza mukadzi anenge akazvitakura obva abva pamuviri, asi osara asina kukuvadzwa zvakanyanya; murume anenge amukuvadza ngaaripiswe zvinenge zvarehwa nomurume womukadzi iyeyu, zviri zvinhu zvinobvumwawo nedare. Asi kana mukadzi uyu achinge akuvadzwa, murume amukuvadza ngaarangwe sezvinoreva mutemo unoti, upenyu ngahutsiviwe noupenyu, ziso neziso, zino ritsiviwewo nezino, ruoko noruoko, gumbo richitsiviwawo negumbo, apisa mumwe ngaapiswewo, akuvadza mumwe ngaakuvadzwewo, arova mumwe ngaarohwewo. “Kana munhu akarova ziso romuranda wake, wechirume kana wechikadzi akaritushura, ngaasunungure muranda wacho aende zvake pamusana peziso rake. Kana munhu akarova zino romuranda wake, wechirume kana wechikadzi, zino racho rikaguka, ngaasunungure muranda iyeyo pamusana pezino rake.
 “Kana muranda akatiza tenzi wake, achizopotera kwamuri musamudzosere kuna tenzi wake. Ngaagare nemi kwaanenge asarudza chero muguta ripi zvaro renyu kwaanoda zvake. Regai kumubata zvakaipa.
1 Timoti 6:1-2
 Vose vari mujoko rouranda vanofanira kuziva kuti vatenzi vavo vanofanira kupiwa rukudzo rwose kuti zita raMwari uye chidzidziso ichochi chirege kushorwa. Avo vana vatenzi vanotenda havafaniri kusaremekedzwa pamusana pokuti vave hama nehama navo asi vavakutofanira kuvashandira zviri nani nokuti ivo vanobatsirwa nezvavanoshanda vatendi uye vadikanwi. Izvi unofanira kuzvidzidzisa vanhu nokuvakurudzira kuita.
 Kana muchida varanda vechirume kana vechikadzi munogona zvenyu kuvatenga kundudzi dzavanhu dzakakupoteredzai. Munogonawo kuvatenga kubva kumhuri dzavatorwa vagere nemi nemhuri dzinemi dzakaberekerwa munyika menyu vachiva venyu. Vanogona kuva nhaka yamunosiyira vana venyu ichiva yavo nokusingaperi. Mungavaite zvenyu varanda venyu, asi vamwe venyu vaIsiraeri musavabate zvakaipa muchivaitira zvehasha.
 Kana uchinge watenga muranda wechiHebheru, ngaakushandire kwamakore matanhatu. Asi mugore rechinomwe, muranda iyeyo murege aende zvake pasina chaanoripa. Kana munhu akatengwa achingova iye oga ngaaende zvake ari oga, asi kana akatengwa aine mudzimai ngaaende pamwechete nomudzimai wake. Kana tenzi wake akamupa mukadzi, mukadzi iyeyo akabereka vana vakomana navanasikana, mukadzi iyeyo navana vake vanofanira kupiwa kuna vatenzi vomudzimai iyeyo, murume uya oenda zvake ari oga. Asi kana muranda akatengwa wacho akati, ‘Ini ndinoda tenzi wangu, ndinodawo mudzimai wangu navana, musandisunungure zvenyu kuti ndiende, pakadaro, tenzi wake ngaauye naye kuna Mwari, amumise negwatidziro romusuo, atore mutsunda amuboore nzeve yake, achava muranda watenzi wake upenyu hwake hwose.’ “Kana munhu akatengesa mwanasikana wake kuti ave muranda, haazosunungurwa muuranda sezvinoitwa munhurume. Kana murume iyeyu akamutengera kuroora asisamudi, ngaamurege achidzikinurwa pamusana pokuti haana mvumo yokumutengesa kuvatorwa nokuti haana kuvimbika kwaari. Kana murume akamutengera kupa mwanakomana wake, ngaamuitire zvaangaitire mwanasikana wake. Kana akatora mumwe mukadzi ngaarambe achipa mukadzi wake zvaanga achimupa zvezvokudya nezvokupfeka, aregewo kushomekesa mazuva aaipinda naye mumba. Kana akarega kumuitira zvinhu zvitatu izvozvi, mukadzi iyeyo ngaaende zvake pasina mari inoripwa.
 “Kana watengeserwa hama yako, muHebheru, murume kana mukadzi ngaakushandire kwamakore matanhatu. Kana gore rechinomwe rasvika murege abve kwauri aende zvake murusununguko. Paunomurega achibva kwauri achienda zvake murusununguko, usamurege achienda asina chokubata. Mupewo dzimwe mbudzi dzako nehwai dzako nembesanwa dzako neimwe waini yako, usingaite kanyimiramundiro. Mupe maererano nokukomborerwa kwawakaitwa naTenzi Mwari wako. Rangarira kuti wakanga uri muranda kuIjipiti, ukazonunurwa naTenzi Mwari wako, saka ndichikuudza mutemo iwoyu nhasi uno. “Asi kana muranda wako akati, ‘Handidi zvangu kusiyana nemi,’ achidaro nokuti anofarira iwe nemhuri yako achigarawo newe zvakanaka zvichimunakirawo kugara newe, pakadaro apo tora mutsunda, uboorere nzeve yake pagonhi, anobva ava muranda wako narini, kana ari muranda wechikadzi itawo saizvozvo kwaari. Paunopa rusununguko muranda wako kuti aende zvake, ngachirege kuva chinhu chakakuomera nokuti basa raakakuitira kwamakore matanhatu rinopfuura basa rinoitwa nomushandi anotambiriswa mari rwakapetwa ruviri. Pakadaro Tenzi Mwari wako achakukomborera kakapetwa ruviri pane zvose zvaunoita.
 “Iyi ndiyo mitemo yaunofanira kundopa vaIsiraeri. Kana uchinge watenga muranda wechiHebheru, ngaakushandire kwamakore matanhatu. Asi mugore rechinomwe, muranda iyeyo murege aende zvake pasina chaanoripa. Kana munhu akatengwa achingova iye oga ngaaende zvake ari oga, asi kana akatengwa aine mudzimai ngaaende pamwechete nomudzimai wake. Kana tenzi wake akamupa mukadzi, mukadzi iyeyo akabereka vana vakomana navanasikana, mukadzi iyeyo navana vake vanofanira kupiwa kuna vatenzi vomudzimai iyeyo, murume uya oenda zvake ari oga. Asi kana muranda akatengwa wacho akati, ‘Ini ndinoda tenzi wangu, ndinodawo mudzimai wangu navana, musandisunungure zvenyu kuti ndiende, pakadaro, tenzi wake ngaauye naye kuna Mwari, amumise negwatidziro romusuo, atore mutsunda amuboore nzeve yake, achava muranda watenzi wake upenyu hwake hwose.’ “Kana munhu akatengesa mwanasikana wake kuti ave muranda, haazosunungurwa muuranda sezvinoitwa munhurume. Kana murume iyeyu akamutengera kuroora asisamudi, ngaamurege achidzikinurwa pamusana pokuti haana mvumo yokumutengesa kuvatorwa nokuti haana kuvimbika kwaari. Kana murume akamutengera kupa mwanakomana wake, ngaamuitire zvaangaitire mwanasikana wake. Kana akatora mumwe mukadzi ngaarambe achipa mukadzi wake zvaanga achimupa zvezvokudya nezvokupfeka, aregewo kushomekesa mazuva aaipinda naye mumba. Kana akarega kumuitira zvinhu zvitatu izvozvi, mukadzi iyeyo ngaaende zvake pasina mari inoripwa. “Ani naani zvake anorova munhu zvokumuuraya, ngaaurayiwewo. Asi kana akauraya munhu asina kuita zvokumuhwandira, zvangoitikawo iri tsaona, ngaatize andopotera kunzvimbo yandichasarudza kwaasingazourayiwa. Asi kana munhu akaita maune okuvirukira mumwe nehasha, akamuuraya noujarijari, mutorei paatari yangu paanenge andopotera ipapo aurayiwe. “Ani naani zvake anorova baba vake kana amai vake, anofanira kutofa. “Ani naani zvake anoba munhu achimutengesa, kana kuwanikwa ainaye, anofanira kuuraiwa. “Ani naani zvake anoti rushambwa ngaruwire baba vake kana amai vake, anofanira kuuraiwa. “Ngatiti vanhu vaviri vaitirana nharo, mumwe ozomutema mumwe nedombo kana kuti nechibhakera, nyakurohwa orega kufa, asi ongosara achirwara, ozoita nani okwanisawo kutora mudonzvo achifamba zvake panze, nyakurova mumwe anenge asisapiwi mhosva, asi anosungirwa kuripa waakarova nguva yaakarasikirwa nayo achirwara, uyewo amurapise kusvikira apora. “Kana munhu akatora mubhadha akarova muranda wake wechirume kana kuti wechikadzi muranda achibva afa pakarepo, munhu iyeyo ngaarangwe. Asi kana muranda iyeyo akazorarama zuva rimwechete kana maviri zvawo, tenzi wake haazorangwa nokuti muranda wacho anenge ari wake. “Ngatiti varume vorwisana, vokuvadza mukadzi anenge akazvitakura obva abva pamuviri, asi osara asina kukuvadzwa zvakanyanya; murume anenge amukuvadza ngaaripiswe zvinenge zvarehwa nomurume womukadzi iyeyu, zviri zvinhu zvinobvumwawo nedare. Asi kana mukadzi uyu achinge akuvadzwa, murume amukuvadza ngaarangwe sezvinoreva mutemo unoti, upenyu ngahutsiviwe noupenyu, ziso neziso, zino ritsiviwewo nezino, ruoko noruoko, gumbo richitsiviwawo negumbo, apisa mumwe ngaapiswewo, akuvadza mumwe ngaakuvadzwewo, arova mumwe ngaarohwewo. “Kana munhu akarova ziso romuranda wake, wechirume kana wechikadzi akaritushura, ngaasunungure muranda wacho aende zvake pamusana peziso rake. Kana munhu akarova zino romuranda wake, wechirume kana wechikadzi, zino racho rikaguka, ngaasunungure muranda iyeyo pamusana pezino rake. “Kana mombe ikatunga munhu, murume kana mukadzi, akafa, mombe yacho ngaitemwe namabwe. Nyama yayo ngairege kudyiwa. Asi muridzi wayo ngaarege kupiwa mhosva. Asi kana mombe yacho yaiva nomusambo wokutunga vanhu, muridzi wayo akamboyambirwa akarega kuichengeta, kana ikazouraya munhu, murume kana mukadzi, mombe iyoyo ngaitemwe namabwe ife. Muridzi wayo ngaaurayiwewo. Asi kana muridzi wemombe iyoyo akanzi aripe, ngaaripe zvose zvinotemwa nedare kuti iye agorega kuurayiwa. Kunyange mombe ikatunga mwana mukomana kana musikana ikamuuraya, mutongero wacho mumwechetewo. Kana mombe ikatunga muranda wechirume kana wechikadzi, muridzi wayo ngaaripe tenzi womuranda iyeyo mari yamashekeri esirivha makumi matatu. Mombe yacho ngaitemwe namabwe ife. “Kana munhu akasiya zvake mugodhi usina kukwidibirwa, kana kuti ochera mugodhi osiya usina kukwidibirwa, mombe kana dhongi rowira imomo, muridzi womugodhi ngaaripiswe. Ngaape mari kumuridzi wechipfuwo chafa, iye achitore chive chake. Kana mombe yomunhu ikatunga mombe yomumwe ikafa ngavatengese mombe yatunga imwe vagoverane mutengo wacho. Ngavagovanewo nyama yemombe yafa iya. Kana mombe yacho yanga iinomusambo wokutunga dzimwe, muridzi wayo akasaichengeta, muridzi wayo ngaabvise mombe chaiyo inotsika yokuripa inenge yaurayiwa. Asi mombe inenge yafa yacho ichava yanyakuripa mombe uya.
 Tenzi akataurira Mosesi, mugomo reSinai achiti, “Udza vaIsiraeri kuti, kana masvika munyika yandiri kukupai, nyika ngaivewo neSabata rayo pamusana paTenzi. Kwamakore matanhatu rimai zvenyu minda yenyu, muchipemhena migirepisi yenyu kwamakore matanhatu, muchikohwa zvenyu zvirimwa zvenyu. Asi gore rechinomwe ngarive gore reSabata rokuzorodza minda, negore rakapirwa Tenzi. Musarime minda yenyu kana kupemhena migirepisi yenyu. Regai kukohwa zvirimwa zvenyu zvamahoko. Regai kutanha magirepisi emigirepisi yenyu yamusina kumbopemhena iya, igore rokusarutsa minda isina kurimwa. Zvirimwa zvamahoko nemichero inoibva gore iroro rokusarutsa minda, ndozvichava chokudya chenyu imi, navaranda venyu vechirume nevechikadzi, navashandi venyu, navatorwa vagere nemi, nezvipfuwo zvenyu nemhuka dzomunyika yenyu. Zvose zvinoibva gore iroro ndozvichava chokudya. “Mukachengeta makore okusabata basa muminda kanomwe munenge matokwanisa makumi mana amakore ana makore mapfumbamwe. Pazuva rechigumi remwedzi wechinomwe pazuva rokuripira zvitadzo nokuwadzana naMwari, hwamanda ngadziridzwe munyika yenyu yose. Eresai gore ramakumi mashanu, muparidze kuvanhu vose vomunyika yenyu nezvorusununguko. Kwamuri, igore rehwamanda, gore rokuti munhu wose anofanira kudzokera pamunda pake, munhu wose achidzokera kumhuri yokwake. Gore rechimakumi mashanu kwamuri, igore rokupemberera Jubhiri iroro, mugore iro regai kurima minda yenyu, kana kukohwa zvemahoko kana kutanha magirepisi pamigirepisi yamusina kupemhena iya. Ndinodaro nokuti igore rehwamanda, kwamuri igore rinoera. Muchadya zvamahoko omuminda yenyu. “Mugore iroro rehwamanda, munhu wose ngaadzokere pamunda pake. Kana muchitengeserana kana kutengerana, vaIsiraeri pachenyu, musabiridzirane. Kana munhu otenga munda womumwe, ngapaverengwe makore apfuura kubvira pagore rehwamanda, munda ngautengeswe pachiverengiwa makore okurima asara. Kana kuchine makore mazhinji mutengo wacho ngaukwidzwe. Asi kana kwasara makore mashoma mutengo wacho ngauderedzwe nokuti chaanokutengesera chaicho huwandi hwamakore auchazorima. Musabiridzirane pachenyu, asi ityai Mwari wenyu nokuti ndini Tenzi, Mwari wenyu ndinodaro. “Chengetai mirao yangu nemitemo yangu muite zvainoreva kuti mugare munyika yenyu makagarika makagarikana. Nyika yenyu ichava nyika yamaguta ezvirimwa. Muchadya zvenyu muchiita zvokutorasa, mugere murugare. “Kuda mumwe wenyu angati, ‘Ko tichadyeiko mugore rechinomwe patisingabvumirwi kurima minda kana kukohwa mbesa?’ Ndichakutumirai chikomborero changu pagore rechitanhatu zvokuti minda yenyu ichabereka mbesa dzakaenzana nedzemakore matatu. Pamunodyara minda yenyu mugore rechisere munenge muchiri kudya zvamakakohwa kusvikira mugore rechipfumbamwe. Pamunenge muchikohwa zvegore iroro munenge muchitodya zvakare. “Nyika haitengeserwe munhu zvachose nokuti nyika ndeyangu, imi muri vaenzi pairi vandinotombopawo zvangu pokugara. “Munyika yenyu yose zvayo, munhu akambotengesa munda, ane mvumo yokuutenga zvakare. Kana mumwe muIsiraeri apindwa nourombo akasvika pakutengesa munda wake hama yake yomumba ngaiuye idzikinure munda iwoyo wakatengeswa nehama yake. Kana munhu asina hama yomumba yokudzikinura munda wake, asi iye ozopfuma zvokuti anowana mari yokuudzikinura nayo, ngaaverenge makore akapera kubvira panguva yaakautengesa, amudzosere muripo unokwanirana namakore anenge asara kusvika pagore rehwamanda, ozobva odzokera pamunda pake. Asi kana asina chokuudzikinura nacho kuti uve wake zvakare, uchagara zvawo uri mumaoko emunhu akautenga kusvikira gore rehwamanda. Mugore rehwamanda unenge usisiri womunhu uya akautenga. Muridzi wawo ndopaachadzokera zvake pamunda pake. “Kana munhu akatengesa imba yake iri muguta rakakomberedzwa norusvingo, ane mvumo yokuidzikinura kusati kwapera gore rokuitengesa kwake. Gore iroro rose ane mvumo yokuidzikinura. Asi kana gore rikapera asina kuidzikinura, imba yakadai, iri muguta rakakomberedzwa norusvingo, ichazogara iri yomunhu akaitenga iyeyo pazvizvarwa zvake zvose, haasungirwi kuidzosera kumuridzi pagore rehwamanda. Asi dzimba dzomumaruwa, kusina kukomberedzwa norusvingo, dzine murao mumwechete noweminda. Varidzi vadzo vane mvumo yokudzidzikinura, uyewo pagore rehwamanda dzinodzoserwa kune varidzi vadzo. Mumaguta avaRevhi, vaRevhi vane mvumo yokudzikunura dzimba dzavo dzomumaguta avo nguva ipi neipi zvayo. Kana muRevhi akarega kudzikinura imba yakatengeswa muguta ravo inodzokera kwaari mugore rehwamanda. Nokuti dziri mumaguta avaRevhi ndedzavo mukati mavaIsiraeri. Asi mafuro akapoteredza maguta avaRevhi ngaarege kutengeswa nokuti ndeavo narini wose. “Kana mumwe wako muIsiraeri agere newe akawirwa nourombo, zvokutoshayisisa chokubata, mutore ugare naye umubatsire, sezvaungangoitira mutorwa kana munhu anokumbira pokugara mumusha mako. Usareve imwe mari yokuwedzera pamusoro peyawakamukweretesa, asi itya Mwari wako urege mumwe wako muIsiraeri agare zvake newe. Usamukweretese mari uchida kuti azokudzosera yabereka imwe pamusoro, kana kumutengesera zvokudya uchida kuti uwane zvako imwe mari pamusoro pomutengo wazvo. Ini Tenzi ndinodaro, ndini Mwari wenyu ndakakuburitsai munyika yeIjipiti kuzokupai nyika yeKanani kuti ndive Mwari wenyu. “Kana mumwe wako muIsiraeri agere newe, apindwa nourombo, akazvitengesa kwauri rega kumubata somuranda. Ngaagare newe uchimubata somushandi zvake kana kuti muenzi ari kumbogara zvake newe. Ngaakuitire basa somushandi kusvikira gore rehwamanda, ndopaachazobva zvake pauri iye navana vake, odzokera zvake kumusha kwake, kunyika yemadzibaba ake. Ndinodaro nokuti vaIsiraeri varanda vangu vandakaburitsa munyika yeIjipiti, havafanire kutengeswa savaranda. Usamubate zvakaipa uchimuitira zvehasha asi itya Mwari wako. Kana muchida varanda vechirume kana vechikadzi munogona zvenyu kuvatenga kundudzi dzavanhu dzakakupoteredzai. Munogonawo kuvatenga kubva kumhuri dzavatorwa vagere nemi nemhuri dzinemi dzakaberekerwa munyika menyu vachiva venyu. Vanogona kuva nhaka yamunosiyira vana venyu ichiva yavo nokusingaperi. Mungavaite zvenyu varanda venyu, asi vamwe venyu vaIsiraeri musavabate zvakaipa muchivaitira zvehasha. “Mutorwa agere nemi kana kuti mupfuuri agere nemi akapfuma asi mumwe wenyu, muIsiraeri obva apindwa nourombo ozvitengesa kumutorwa kana kumupfuuri agere nemi kana kune mumwe wemhuri yomutorwa iyeyo, shure kwokuzvitengesa kwaakaita, zvinobvumirwa kumudzikunura. Anogona zvake kudzikunurwa nomumwe wake muIsiraeri, angave sekuru wake kana babamukuru kana babamudiki wake, kana kuti mukoma kana munun'una wake, kana imwe hama yake yomudzinza rokwake. Dai kuri kuti iye apfumawo anogona kuzvidzikinura pachake. Ngaaverengerane makore nomunhu akamutenga, kubvira pagore raakazvitengesa kwaari kusvikira pagore rehwamanda. Mari yacho inofanira kuwirirana nemakore acho. Makore aakanga aina vatenzi vake anofanira kutorwa semakore aakanga achiita zvake basa somushandi. Kana kuchine makore mazhinji asara ngaaripe chikamu chemari inosara pamari yaakatengwa nayo pabviswe mari yamakore aakamushandira. Kana pasara makore mashomanana, ngaaverengerane naye makore asara kusvika kugore rehwamanda abvise muripo wake unowirirana namakore iwayo asara okuzvinunura. Zvaanenge achimushandira gore negore ngaarege kumuomesera upenyu imi makatarisa zvenyu. Kana asina kudzikunurwa nenzira iyoyi ngaapiwe rusununguko rwake mugore rehwamanda iye navana vake. Ndinodaro nokuti vaIsiraeri varanda vangu. Ndevangu nokuti ndini ndakavaburitsa munyika yeIjipiti. Ndini Tenzi, Mwari wenyu ndini ndinodaro.